एक औंलाले २ सय टन वजन भएको डुङ्गा तानेपछि.......
पूर्वी युरोपियन राष्ट्र जर्जियाका ४२ वर्षीय जिओर्जी रोस्तोमाश्विलीले २०० टन वजन भएको डुङ्गालाई एक औांले तानेर अनौठो रेकर्ड बनाएका छन् ।
यसलाई जर्जिया रेकर्डमा दर्ता गरिएको छ । उनले एक मिनेटमा ५ मिटर सम्म डुङ्गालाई तान्नुपर्ने थियो, तर उनले ४० सेकेन्डमा नै पूरा गरेका हुन्....
क्यानडाका सांसदहरुको तलब कति ?
विश्वका अधिकांश देशहरुमा सांसदको तलबलाई लिएर बहस हुने गरेको छ । केही विवादित नै छन् भने कुनै देशको सरकारले सांसदको तलबलाई निकै गम्भिरताका साथ लिदैँ आइरहेको छ ।
विश्वका केही यस्ता देशहरु छन् जहाँ सांसदहरुको तलब अति नै धेरै रहेको छ भने कतिपय देशमा अति....
बेलायतमा जन्मियो विश्वकै सानो बच्चा
बेलायतमा विश्वकै सानो बच्चा जन्मिएको छ । २३ हप्ताको गर्भबाट जन्मिएकी ती बच्चीको शरीर मान्छेको हत्केलामै अटाउँछ । ती शिशुको नाम डेजी शेरवुड हो । उनलाई आमा कारा ओनकेन र बुवा साइमन शेरवुडले जन्म दिएका हुन् ।
१८ जुलाईका दिन जन्मिएकी ती शिुशुको जन्मिँदाको वजन....
निधारमा टीका लगाउनुको यस्तो छ फाइदा
निधारमा टीका लगाउनुको पछाडि धार्मिक भावनाका साथै वैज्ञानिक आधार पनि छ ।
निधारमा नियमित रुपमा टीका लगाउँदा दीमागी....
यसरी डुब्दैछ इन्डोनेशियाको राजधानी जकार्ता (भिडियो)
एजेन्सी । इन्डोनेशियाको जकार्ता सहर डुब्दै गएपछि राजधानी नै सार्ने निर्णय गरेको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार जकार्ता विश्वको सबैभन्दा छिटो डुबिरहेको सहर हो । यो वर्षमा २५ सेन्टिमिटर डुबिरहेको छ ।
बढ्दो समुद्री सतह र जमिनमुनिको पानी अत्यधिक मात्रामा निस्कासन गरिएको परिणामस्वरुप यस्तो....
६ तलाबाट खसेर पनि युवती बाच्न सफल
न्यूजलय बुधबार ११, भदौ २०७६
मेक्सिको । मेक्सिकोस्थित एक युवती छ तलाबाट खसेपछि पनि बाँच्न सफल भएकी छिन् ।
८० फिट माथिबाट खसेपछि पनि बाँच्न सफल भएकी छन् ।
एलेक्सा तेराजा नाम गरेकी ती योगा गर्ने क्रममा ८० फिट माथिबाट खसेकी थिइन् । । सान पेद्रोस्थित अपार्टमेन्टको छैटौँ तलाको बाल्कोनीबाट....
करेलाको सेवनले मधुमेह, अस्थमा, रक्तचापजस्ता रोगमा फाइदा पुर्याउँछ । प्राकृतिक चिकित्सामा....
अमेरिकामा सांसदहरुको तलब कति ?
विश्वका केही यस्ता देशहरु रहेका छन् जहाँ सांसदहरुको तलब अति नै धेरै रहेको छ भने कतिपय देशमा....
शास्त्र अनुसार बुधबार यी कार्य गर्नुहोस्, फल प्राप्ती हुन्छ
हामीले कुनैपनि कार्य गर्दा बार अनुसार गरे हाम्रो जिवनमा धेरै राम्रो हुन्छ । बार अनुसार कार्य गर्दा हाम्रो जिवनमा आईपर्ने समस्याहरु हटेर जान्छ, जिवन सुखमय बन्छ । जस्तै कुनै कुरा कुनै बार गर्दा अशुभ हुने हुन्छ भने कुनै कुरा कुनै बार गर्दा शुभ हुने भएकोले....
१८ वर्षीया युवतिले २६ करोडमा आफ्नो कुमारीत्व बेचेपछि.......
न्यूजलय सोमबार ०९, भदौ २०७६
रोमानियाकी एक १८ वर्षीया युवतीले करिब २६ करोड रुपैयाँ ९२० लाख पाउन्ड स्ट्रलिङमा आफ्नो कुमारीत्व बेचेको थाहा पाएपछि उनको बाबु–आमाले उनलाई घर फर्कन प्रतिबन्ध लगाएका छन् । बाबुआमाले त्यस्तो नगर्न दिएको धम्कीको बाबजुद् एलेएक्जान्ड्रा खेफेरेन नाम गरेकी ती युवतीले हङकङका एक व्यापारीलाई आफ्नो कुमारीत्व बेचेकी....